बालुवाटारमा गौतमले ओलीलाई भने, ‘प्रचण्ड र माधवलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुन्न’
Homeराष्ट्रिय खबरबालुवाटारमा गौतमले ओलीलाई भने, ‘प्रचण्ड र माधवलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुन्न’
काठमाडौं । नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पार्टीभित्र देखिएका समस्याको समाधान बैठकबाटै खोज्न सुझाव दिएका छन् । आइतबार बिहान बालुवाटारमा अध्यक्ष ओलीसँगको भेटवार्तामा उपाध्यक्ष गौतमले प्रचण्ड वा माधव नेपाललाई गालि गरेर समस्याको समाधान नहुने भन्दै बैठक बसेर प्रस्तावका बारेमा छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिने अवस्था कायमै रहेको जनाएका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले आइतबार बिहान छलफल गर्न भन्दै गौतमलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । बालुवाटारमा गौतम पुग्दा महासचिव तथा अर्थमन्त्री समेत विष्णु पौडेल पनि त्यही थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले गत शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा पेश भएको प्रस्तावका बारेमा नेताहरुबीच कुराकानी भएको थियो । खासगरी ओलीले प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता नलिए समस्या बढ्दै जानसक्ने भन्दै प्रचण्डलाई त्यसबारे कन्भिन्स गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘मैले तपाईलाई यहाँ बोलाउनुको कारण पार्टीभित्र देखिएको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हो ? यसमा तपाईकको धारण को हो ?’, ओलीले गौतमलाई सोधेका थिए । जवाफमा गौतमले ‘प्रचण्डलाई वा माधवलाई गालि गरेर समस्या समाधान हुँदैन । यसले त झन झगडा बढ्छ । यसको समाधान भनेको बैठक बसेर प्रस्तावहरुमाथि बैठकमा छलफल गर्न सकिन्छ । यदि फिर्ता लिन मिल्ने भए त्यही बैठकमा लिनुस् भनेर भन्न पनि सकिन्छ तर त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि सच्चिन जरुरी छ’, गौतमको भनाई उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो ।
प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने ओलीपक्षीय नोतहरुको भनाई रहँदै आएको छ । उनीहरुले एकल रुपमा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव पेश नै गर्न नमिल्ने जिकिर गरेपछि उपाध्यक्ष गौतमलगायतका नेताहरुले उक्त प्रस्ताव ५ पाँचै जना नेताले छलफलमा ल्याइएको बताएका छन् । प्रचण्डसहित ५ जना नेता नै प्रस्तावको पक्षमा उत्रिएपछि ओली आफु अल्पमतमा परेको महशुस गर्दै आएका छन् । त्यसपछि ओलीले शनिबार यसबारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग समेत छलफल गरेका छन् ।-रातोपाटी
५ वर्ष बित्न २ वर्ष बाँकी रेसम फिरिरी…. (भिडियोसहित)